နားခိုရာ: ချိုတကူးနှင့် ဂုဏ်ရည်မတူ
အတုနှင့်အစစ်၊ အစစ်ကို ပို၍ မြတ်နိုးသင့်ကြပေသည်။ သို့သော် ...
ကျွန်တော်တို့မြို့တွင် ချိုတကူးဟုခေါ်ကြသော ကုလားလေး တစ်ယောက်ရှိသည်။ သူ့ဘ၀၏ တစ်ပိုင်းတစ်စကို တင်ပြချင်ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွားစဉ် အခါက ချိုတကူးသည် ဆယ့်သုံးနှစ်သားမျှသာ ရှိသေးသည်။ သူ၏ဖခင်သည် ဆံပင်ညှပ်သောအလုပ်ကို လုပ်၍ သူ့မိသားစုကို ရပ်တည်အောင် ဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ သူတို့မိသားစုတွင် သူ့ဖခင်၊ သူ့မိခင်အပြင် အစ်ကို တစ်ယောက်၊ အစ်မတစ်ယောက်နှင့် သူပါဆိုလျှင် မိသားစု၌ ငါးယောက်ရှိသည်။
စစ်ကြီးဖြစ်၍ အိန္ဒိယလူမျိုးများ အိန္ဒိယသို့ပြန်သောအခါ သူတို့မိသားစုသည်လည်း ကယောင်ကတမ်းနှင့် အိန္ဒိယသို့ပြန်ကြရန် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းမှ သဘောင်္ဖြင့်ဆန်တက် လိုက်ပါသွားကြသည်။ သူတို့ခရီးစဉ်မှာ သင်္ဘောဖြင့် ဆန်တက်၍ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းရောက်မှ အိန္ဒိယပြည်ဖက် ကန်းကြောင်း ကူးကြရန်ဖြစ်သည်။
သူတို့ လိုက်ပါသွားသော သင်္ဘောသည် နောက်ဆုံးသင်္ဘောဖြစ်၍ စစ်မိန့်လွှမ်းမိုးသော သင်္ဘောလည်း ဖြစ်သည်။ အထက်မြန်မာပြည် မြို့ကြီးတစ်မြို့ အရောက်တွင် သင်္ဘော ခေတ္တ ဆိုက်ကပ်နားနေသည်။ ချိုတကူး၊ သူ့ဖခင်နှင့် သူ့အစ်ကို၊ သားအဖသုံးယောက်သည် မြို့ပေါ်သို့ ခေတ္တတက်ရောက် လည်ပတ်ပြီးလျှင် လိုအပ်သမျှ စားစရာကလေးများ ၀ယ်ခြမ်းကြသည်။ သင်္ဘော ဥသြသံ ကြားရ၍ သင်္ဘောဆိပ်သို့ ဒရောသောပါး ပြန်ပြေးလာကြသည်။ သူတို့ ကမ်းနဖူးရောက်သောအခါ သင်္ဘောရေလယ်သို့ ရောက်နေပြီ။ သင်္ဘောသည် စစ်မိန့်ဖြင့် အရေးတကြီး ထွက်ခွာသွားရလေပြီ။ သင်္ဘောပေါ်တွင် သမီးနှင့်မိခင်။ ကမ်းပေါ်တွင် သားအဖသုံးယောက်။ ချိုတကူးတို့သည် ရုတ်တရက် အခြေအနေကို နားမလည်ဘိသကဲ့သို့ ကြောင်နေကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် သမီးနှင့်မိခင်တို့သည် အိန္ဒိယသို့ ပါသွား၍ သားအဖသုံးယောက်သည် မြန်မာပြည်တွင် အူလယ်လယ် ကျန်ရစ်ရရှာသည်။ တဖက်နှင့် တဖက် စစ်မီးလျှံအတွင်း မည်သို့ဖြစ်ကြလေမည်ကို မတွေးဝံ့အောင်ပင် ဖြစ်ကြရသည်။
သို့သော်လည်း မတတ်နိုင်ကြလေပြီ။ သားအဖသုံးယောက်သည် စိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့် မြေလတ်ပိုင်း မူလနေထိုင်ရာ မြို့ကလေးဆီသို့ ပြန်လာကြသည်။ လမ်းတလျှောက်လုံးတွင် အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသား စစ်တပ်များ ရှိကြသေး၍ တစ်တပ်ဝင်၊ တစ်တပ်ထွက်နှင့် ဆံပင်ညှပ်ကာ အသက်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် မြို့ကလေးသို့ ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်လာကြသည်။
ဂျပန်ခေတ်တွင်လည်း ဆံပင်ညှပ်၍ပင်အသက်မွေးကြရသည်။ သို့သော် ၀မ်းရောဂါ တစ်ချီဖြစ်လိုက်ရာ ချိုတကူး၏ ဖခင်နှင့်အစ်ကိုတို့သည် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ကိစ္စချောသွားကြပြန်သည်။ ယခုကား ချိုတကူး တစ်ယောက်ထဲ။
ချိုတကူးသည် ကြာရှည် စိတ်ညစ်တတ်သူ မဟုတ်။ ဖြစ်သမျှ ကြုံသမျှတို့ကို ထမင်းစားသကဲ့သို့၊ ရေသောက်သကဲ့သို့ ရယ်ကာမောကာ ပြန်ပြောတတ်သည်။ ဧရာမ လောကဓံကြီးကို ကြုံရသည်ဟုလည်း သူမသိ။ မသိသောကြောင့် သူမတွေး။ မတွေးသောကြောင့် သူမဆင်ခြင်။ မဆင်ခြင်သောကြောင့် လောကဓံကို သူမမြင်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားပွဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ လုပ်လျှင် ဘယ်သူကမှ သူ့ကို မဖိတ်ကြားရပဲ သူရောက်လာတတ်သည်။ ဘယ်နေရာမှာပင် သုံးသုံး၊ ကိုချိုတကူးက မငြင်း။ မျောက်လုပ်၍လည်း ကသည်။ မြေလျှောက် မင်းသားလုပ်၍လည်း ကသည်။ ပျော်ပျော်ပဲ။
ထို့ကြောင့်ပင်လား မသိ။ အိမ်နီးချင်းများသည် သူ့အဖြစ်အပျက်ကို ကြားရသောအခါ သနားတော့ သနားကြပါ၏။ သို့သော်လည်း စုပ်သပ်ရုံမျှသာ ဖြစ်သည်။ မျက်ရည်စို့လောက်အောင်ကား ထိခိုက်ခြင်း မရှိကြ။
စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာသုခ၏ "ဂုဏ်ရည်မတူ" ဇာတ်ကားပြသသောအခါ ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ချိုတကူးနှင့် အမှတ်မထင် ဆုံတွေ့ရသည်။ ချိုတကူးနှင့် သူ့အိမ်နီးချင်း မိန်းမကြီး လေးငါးယောက်နှင့်အတူ တစ်ခုံတည်း ထိုင်မိလျက်သား။ ရုပ်ရှင်နောက်ပိုင်း မေသစ် အပူခန်းသို့ ရောက်သောအခါ မိန်းမကြီးမျာသည် မေသစ်ကို သနားလွန်း၍ မျက်ရည်မဆည်နိုင်အောင် ဖြစ်ကြရသည်။ ချိုတကူးလည်း မျက်ရည်ဝေ့နေသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း မျက်ရည်မကျစေကာမူ နှာပိတ်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာပါသည်။
ရုပ်ရှင်ပြီး၍ ထွက်လာကြသောအခါ အမျိုးသမီးကြီးများမှာ မျက်ခွံနီနေသည်။ ချိုတကူးလည်း 'ကောင်းထားတာကွာ၊ ငါဖြင့်မျက်ရည်တောင် ကျမိသေး' ဟု ရယ်မော၍ ပြောပါသည်။
ဖြစ်ရာဘ၀တွင် ပျော်ပျော်ကြီးနေတတ်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင် သနားရမှန်း မသိသော ချိုတကူးက မေသစ်ကို သနားနေပါသည်။ အဒေါ်ကြီးများကလည်း ချိုတကူး၏ ဖြစ်တော်ပေါင်းအတွက် မျက်ရည်စမ်းစမ်းမျှပင် မဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလျက် မေသစ်ကျမှ မျက်ရည်အိုင်ကြရသည်။
ချိုတကူး၏ အဖြစ်သည် တကယ်ဖြစ်၊ အဟုတ်ဖြစ်၊ စစ်စစ် စစ်စစ် မြည်နေသော အဖြစ်စစ်ဖြစ်သည်။ မေသစ်၏ အဖြစ်သည် ပိတ်ကားပေါ်က ဘသဖြစ်စဉ်မျှသာ ဖြစ်သည်။ ချိုတကူး၏ရာဇ၀င်သည် အစစ်။ မေသစ်၏ ရာဇ၀င်သည် အတု။ သူတို့သည် အစစ်ထက်အတုကို ပို၍ ဂရုဏာသက်နေကြသည်။
ကျွန်တော့်စိတ်တွင် မကျေမနပ် ဖြစ်နေမိသည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကိုလည်း ကျွန်တော် မကျေနပ်ပါ။ ကျွန်တော်သည်လည်း သူတို့နှင်နှင်သာ ဖြစ်သည်။ အတုကို မြတ်နိုးနေသည်။
အစစ်နှင့် အတု၊ အတုနှင့်အစစ် ပြဿနာသည် ကျွန်တော့်၏ ရင်တွင် ပို၍ ရှုပ်ထွေးလာပါသည်။ အစစ်နှင့် အတုကို နှိုင်းယှဉ်၍ ကြည့်ချင်တတ်လာပါသည်။ သတိပြုမိလာပါသည်။
ပန်းချီစာစောင်တစ်ခုကို တောင်လှန်မြောက်လှန် ကြည့်နေရင်း၊ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုတွေ့သည်။ ဒေါ်လာ ထောင်ချီ၍ ပေးဝယ်သွားသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။ သပျစ်သီးတစ်ခိုင်၊ ပန်းသီးတစ်စိတ်၊ ဓါးတစ်ချောင်း၊ ဖန်ချိုင့်တစ်ခု၊ နောက်ခံကန့်လန့်ကာတစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းများကို စားသောက်ရန် ဈေးထဲသွားဝယ်လျှင် ငွေတစ်ဆယ်ဖိုးထက် ကုန်မည်မဟုတ်။ သို့သော် အစစ်ကို မမက်မော၊ အတုမျှသာဖြစ်သော ပန်းချီကားကို ဒေါ်လာထောင်ချီ၍ ပေးဝယ်ကြသည်။ အတုကို အစစ်ထက် တန်ဖိုးထားကြသည်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် အစစ်ထက် အတုကို မြတ်နိုးလေးစားကြသော လောကကို ကျွန်တော် မကျေနပ်ချင်ပါ။ အစစ်ကိုသာ တန်ဖိုးထားစေချင်သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အတုကို သြဘာပေးနေသည်။ မေသစ်ကို ပိုသနား၍ ပန်းချီကားကို ပိုချစ်နေသည်။
ဤသို့တွေးရင်း ချိုတကူး၏ အဖြစ်အပျက်ကို ဆရာသုခလို ဒါရိုက်တာမျိုးနှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ရသော်ဟု တွေးမိပါသည်။ ချိုတကူး ကိုယ်တိုင် တစ်ကိုယ်လုံး မျက်ရည်ဖြစ်ပြီး မျောသွားမလား မသိပါ။
ကျွန်တော်၏စိတ်တွင် လျှပ်ပြက်သကဲ့သို့ တစ်ချက် ၀င်းကနဲဖြစ်သွားပါသည်။ အလှမယ်၏ မျက်နှာကို လွှမ်းထားသော ဇာပုဝါ ပြုတ်ကျသည့်အခိုက် အလှမယ်၏ မျက်နှာကို ခေတ္တမျှ မြင်လိုက်ရသကဲ့သို့ 'အနုပညာ'၏ မျက်နှာကို ရိပ်ကနဲ မြင်လိုက်ရသလိုလို ထင်မိပါသည်။
ဆရာအောင်သင်း - ချိုတကူးနှင့် ဂုဏ်ရည်မတူ
ဟုတ..်.တကယ် rash hour ဖြစ် နေလို. ခေါင်းစဉ် ကို အဝေး ကနေ လှမ်းပြီး ရှုလိုက်တော. (ဘလော.လစစ် ကနေ) ချိူတကူးဖြစ် နေတာ နဲ့ အေ…ဒါ ငါဖတ်ပြီးသားဘဲ နောက်မှ တခေါက် လာဖတ်မယ် ဆိုပြီး နေလိုက် မိတာပါ။ ခင် မင် မှုက ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ အပြည်.ရှိပါတယ။်